IREZINE: SII KORDHAYA OO DARYEELAYA WARSHAD GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo daryeelo iridiin
Warshad leh dabeecad, dabacsanaan iyo furfuran, iyo sidoo kale aan la saadaalin Karin - sidaas growers waxay tilmaamayaan warshad aan caadi ahayn oo loo yaqaan irezine. Bilaabbadu waxay si dhib yar u heli karaan habka kiraystaha xawliga ah, laakiin beeralayda ubaxyada leh ee leh dulqaad iyo dulqaadka waxay abuuri karaan shuruudaha lagama maarmaanka ah ee ubaxyada iyo helitaanka caleemo, geedo sharaf leh. Haddii aad go'aansato inaad soo qaadatid degaankan midabka leh ee guriga leh, waxaa muhiim ah in la ogaado waxyaabaha ku saabsan xanaanada daryeelka.
Irezine (magacyo kale - Irezina, Iresina) waa xubin ka mid ah qoyska amaranth, waxay noqon kartaa warshad dilka ah oo qoryo, geed ama geed, iyo xitaa geed. Wuxuu ku koraa Australia, Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika. Noocyada qurxinta gudaha waxay gaareen 40-60 cm oo dherer ah, waxay ku wareegsan yihiin qulqulaya, caleemo saaran ilaa 6 cm oo dherer ah, oo casaan ah, midab casaan iyo midabo madow oo leh xididdada mugdiga ah.
Thanks to midabka aan caadi ahayn, irezin ayaa helay sumcad.
Ma taqaanaa? Maanta, waxaa jira ilaa 450 nooc oo dhirta walxaha ku jira meeraha, kaas oo, marka lagu daro awoodda sawir-qaadis, waxay cuni karaan cuntada borotiinka ah. Kama fogaan cayayaanka, lafaha, rahanka, iyo xataa qorraxda iyo jiirka.
At guriga, waxaa ubaxyo aad u dhif ah, laakiin xitaa haddii uu sameeyo, ubaxyo dhalaalaya dhalaalaya lahayn lahayn qiimaha madaxtooyada. Irezine waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro qaabab muuqaal ah, iyo sidoo kale sida xayawaanka ee dheriyada ama naqshadaha naqshada.
Dhirta badan ee geedaha ah waxaa ka mid ah xiddigaha sida jimicsiga, lithnis, acanthus, cawska cankerer, qaansarka ornamental, yaskolka, tiarell, gelenium, iyo goyska.
Guud ahaan, waxaa jira ilaa 80 nooc oo cayayaanka dhirta, laakiin laba ka mid ah ayaa ka mid noqday dhirta sida ornamental:
Ireeda Linden (Ireeda lindenii). Dheeriga geedaha asal ahaan asal ahaan ka soo jeeda Ecuador. Gaarid 50 cm, oo ku rinjiray midab khafiif ah oo dhiig-casaan leh oo leh dhuudh casaan. Caleemaha waa oval, tilmaamaya at darfaha, laga bilaabo 2 ilaa 6 cm dherer. Geedka waxaa inta badan lagu beeray dibedda. Faa'iidada xayawaankani waa kobcinta dhaqsaha ah, tufid qurux badan oo muuqaal leh - dhererkoodu waa 10-12 cm oo dhulka hoostiisa ah iyo qaababka dhaadheer ee Linden qaabab qurux badan oo qurux badan, oo muddo gaaban abuuraya rooga rinjiga ka baxa caleemaha, oo ka dhigno iftiin muuqaal ah oo ka kooban halbeegga muuqaalka.
Irezine Herbst (Ireeda herbstii). In duurka, koraa Brazil. Cirbadaha kobaca yar yar - kaliya 20-40 cm oo dherer ah, caleemuhu waa wareegsan yihiin, balaadhan, qashinka talooyinka. Hooska caleemaha waa maroon madow oo leh dhuudh casaan leh. Waxaa sidoo kale jira qaybo hoose oo leh cagaar cagaaran oo caleemo ah, kuwaas oo bustayaal iyo xididada jaalaha ah-cagaaran ku yaal. Waxaa jiri kara geedo leh midab aan caadi aheyn - shinni ah shinni on caleemaha casaanka. Irezine Herbst waxaa badanaa loo isticmaalaa dhir digeeri ah.
Daryeelka ku haboon ee deganaanshaha kuleyliyaha ayaa xaqiijin doona kobaca degdegga ah, quruxda iyo caafimaadka. Daryeelka baadiyaha waxaa ku jira xulashada nalalka iyo heerkulka la doonayo, habka qoyaanka, iyo sidoo kale quudinta joogtada ah iyo xoqista.
Irezine wuxuu u baahan yahay iftiin badan, sidaa darteed si kor loogu qaado guri wuxuu u qalmaa in uu doorto meesha ugu caansan ee koonfurta, koonfur-galbeed ama koonfur-bari.
Haddii aysan suurtagal ahayn, waxaad isticmaali kartaa dhinaca bari ama galbeedka qolka. Marnaba ha ku dhejin dheriga iridiin meel u dhow waqooyiga guriga.
Guga kulaylaha iyo bilaha xagaaga, iridiin waa in si fudud loo xiiraa si looga fogaado gubashada haddii ay ku dhacdo qorraxda tooska ah. Warshadu waa inay ahaato mid tartiib tartiib ah oo si habsami leh loogu habeeyo raajooyinka tooska ah ee qorraxda. Dhererka saacadaha iftiinka waa inay ahaadaan ugu yaraan 14 saacadood, oo doorbidan 16 saacadood. Si aad u buuxiso nalalka la'aanta, waxaad isticmaali kartaa nalal khaas ah.
Waa muhiim! Iyadoo la'aanta iftiiminta, caleemaha ayaa lumaya hoyaha dhalaalaya dhalaalaya, ayaa afkoda la soo saaraa, baadiyaha ayaa lumisa soo jiidashada.
Irezine way kala duwan tahay heer aan qabyo ahayn oo ku saabsan heerkulka. Sanadka oo dhan, waxaad ku hayn kartaa heerkulka gudaha + 16 ... +25 ° C.
Heerkul kasta oo ka baxsan saamiga cayiman wuxuu saameyn ku yeelan karaa xaaladda xun ee irridine: haddii uu aad u hooseeyo (laga bilaabo +12 ° C iyo ka hoose), dhirta ayaa laga yaabaa inay jilciso, lumiso caleemaha, iyo haddii ay aad u sarayso, caleemuhu way engegi doonaan.
Wixii iridine sii kordhaya, waxaa lagama maarmaan ah in la iibsado ciidda khaaska ah oo leh pH (6-7) dhexdhexaad ah ama waxoogaa yar. Shubu waa in ay u baahan tahay inay bixiso dheecaan tayo sare leh.
Baro muhiimada astaamaha ciidda, sida loo go'aamiyo kiimiko, sida iyo sida loo demiyo ciidda.
Substrate waxaa loo diyaarin karaa qaybaha soo socda:
dhul sodan (4 qaybood);
dhulka caleen (4 qaybood);
humus (2 qaybood);
ciid (1 qaybood);
peat (1 qayb).
Isku dar isku mid ah ayaa la diyaariyaa marka la geynayo iridiin. Waxaa lagama maarmaan ah in la soo celiyo iyadoo nidaamka xididka uu korayo, celcelis ahaan, hal mar 2-3 sano oo diiran.
Si aad u waraabisid, waxaad isticmaali kartaa jilicsan (roob ama dhala), geddigay ama la dejiyey inta lagu jiro biyaha maalinta oo ah heerkul ah 20 ... 25 ° C. Xeerka ugu muhiimsan ee waraabinta waa mid dhexdhexaad ah, maaddaama labadaba labadaba iyo xadiga qoyaanka ay khatar u yihiin iridiin.
Guga iyo xagaaga, waxay u baahan tahay waraabin badan. Go'aami baahida loo qabo qoyaanka iyadoo qallajinaysa dhul-beereedka.
Xilliga jiilaalka, waraabinta waxaa la yareeyaa 1 jeer wiigii, gaar ahaan haddii aad warshadda ku hayso heerkul hoose (+ 14 ... +16 ° C). Laakiin xitaa xilliga qaboobaha waa suurtogal in la ogolaado qalajinta dhererka ah ee jilitaanka dhulka.
Ma jiro shuruud gaar ah ee qoyaanka hawada, iyo caaggu wuxuu u adkaysan karaa xitaa inuu hawo qalajiyo qolka. Si kastaba ha ahaatee, inta lagu jiro bilaha xagaaga kulul, iyo sidoo kale jiilaalka, inta lagu guda jiro muddada qalabka kulaylka, waa lagama maarmaan in qoyan qaybta above ee geedka ka soo sprayer dhowr jeer toddobaadkii.
Geedku wuxuu ubaahan yahay quudinta sanadka oo dhan, laakiin inta jeer ee bacrintu waxay ku xiran tahay xilliga xiga. Guga iyo xagaaga, marka ay jirto mudo ah korriin degdeg ah, bacrimin waa in la isticmaalo toddobaadle.
Waxaad isticmaali kartaa Bacriminta organic iyo macdanta labadaba, sida ku qoran tilmaamaha xirmada. Inta lagu jiro xilliga koritaanka gaaban (dayrta iyo jiilaalka), inta jeer ee bacarimiddu hoos u dhacdo illaa 1 mar bishiiba.
Sida bacriminta dabiiciga ah ayaa loo isticmaalaa cuntada lafaha, cuntada kalluunka, caanaha caanaha, qolofta ukunta, maqaarka muuska, diirka basasha, maro.
Xaaladdan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu yareeyo xaddiga nafaqooyinka qiyaasta cayiman. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah milkiilayaasha iridiin waxay ku andacoodaan in xayawaan qolle ah ay u dulqaadanayaan bilaha jiilaalka si fiican, xitaa iyada oo aan la siin.
Si loo sameeyo baadiyaha qaab qurux badan, dib u nooleynta iyo dayactirka iridine, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo manjooyin joogto ah, ama si kaamil ah, xoqin. Waxaad u baahan tahay inaad ka saarto sare sare iyo caleemaha qaarkood.
Goobta, geedka ka dib waqti gaaban u ogolaan doonaa badan oo caleemaha yar yar bilaabaan baadiyaha, taas oo ku siin doonaa khasaare dheeraad ah. Guga hore, waxaad ku isticmaali kartaa manjooyin dheeraad ah, kaas oo noqon doona kicinta korriinka korriinka ee xayawaanka caadiga ah.
Ma taqaanaa? Marka ereyga "ubax" oo ku yaala inta ugu badan ee isa soo taraya oo leh qaab qurux badan, oo casri ah, casri ah oo isku dhafan. Si kastaba ha noqotee, dhammaan ubaxyada ma laha astaamahaas. Tusaale ahaan, ubaxyada libaaxyada ee libaaxyada ka dib marka ubaxu u eg yahay dhakaatiirta dhabta ah oo leh muuqaal aad u wanaagsan.
Faafinta iridiin waxay ku dhacdaa abuur iyo raac, qaabka ugu dambeeya ee loo isticmaalo inta badan kiisaska intiisa badan sababtoo ah fududaynta iyo natiijada degdegga ah. Nidaamka waa in la sameeyaa horraanta gu'ga.
Iska yaree gooyn ku saabsan 7-8 cm dheer.
Ku shub taangiga ciidda leh (waxaad diyaarin kartaa isku dar ah ciid iyo peat 1: 1 saamiga).
Nadiifi oo hayso heerkulka ilaa +20 ° C.
Gooyntu waxay u baahan yihiin inay daboolaan filimka si loo abuuro "aqalka dhirta lagu koriyo".
Diyaarso dheriyo joogto ah dhirta illaa 10 cm qoto dheer, diyaariso ciidda isku midka ah sida transplanting duurka qaangaarka ah.
Qiyaastii 7-10 maalmood oo xididdada gooynta ayaa dhici doonta, oo sidaas daraaddeed, waxaa loo beeray koboc joogto ah.
Daryeelidda dhirta yaryar way ka duwan tahay daryeelidda tijaabada dadka waaweyn.
Markaad sii kordhiso wakiilkan subtropics, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyinka noocaas ah:
Xilliga dayrta ee caleemaha hoose. Dhirta dhalinyarada waxaa ku dhaca sababo la'aanta iftiin ama ayadoo la adkeynayo manjooyin. Qeybaha dadka waaweyn, dhicitaanka caleemaha hoose waa nidaam caadi ah.
Leaf dhicin geedka oo dhan. Sababtu waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah ama biyo aan ku filneyn.
Qabashada afkoda. Waxay dhacdaa marka ay jirto iftiin ku filan.
Geedka waxaa si aad ah u saameeya cudurada fangas ama bakteeriyada, laakiin weerarka cayayaanka waxyeellada leh iyo shilinta badanaaba waxay dhacaan sababtoo ah xad-gudubka xeerarka daryeelka. Waa muhiim inaad si joogta ah u kormeerto caleemaha iratein ka baxsan gudaha iyo gudaha sinuska iyo afkoda si aad u aragto "weerarka" ee martida aan la joogin waqtigeeda.
Soo ogow hababka loo isticmaalo si loola dagaallamo aphids, caarada caddaanka ah, caarada caarada, qaniinyada guduudan, goyso.
Inta badan iridiin waxaa saameeya cayayaanka noocaas ah:
Waa muhiim! Haddii aad ogtahay in baadiyaha ay saameeyeen cayayaanka, waxaad u baahan tahay inaad si deg deg ah u eegto dhirta haray qolka dhexdeeda kana soocida kuwa waxyeelloobay qol gaar ah.
Aphid Waxaa suurtagal ah in la ogaado cayayaanka by calaamadaha dibadda: caleemaha caleen, noqdaan daboolka dheecaanka dhegaha, taas oo fangaska madow faafo. Cagaarka cagaaran wuxuu saameynayaa baadiyaha sababtoo ah quudinta xad-dhaafka ah ama maqnaansho dhammaystiran (marka uu baadiyaha daciif yahay), iyo sidoo kale hawo nadiif ah, maqnaanshaha hawo, nalalka aan ku filnayn ama waraabinta. Waxaad la dagaalami kartaa kiimikada ("Aktellik", "Akarin", "Fufanon") sida waafaqsan tilmaamaha.
Whitefly. Cayayaankaasi waa mid aad u adag in laga saaro, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad qaaddo dhammaan tallaabooyinka ka hortagga. Sababta ugu weyn ee muuqaalka ah ee cagaarka waa caddaan, hawo qoyan iyo heerkul sarreeya. Iyada oo habaynta cagaarka ah ee cagaarka, fursadaha muuqaalka kicitaanka cayayaanka. Dhirta cudurku waa in la dhaqaa, haddii ay suurtagal tahay, gacanta ka saar cayayaanka, badalida ciidda. Kadibna waxaad u baahan tahay inaad ku daaweyso diyaargarowga "Confidor" ama "Aktellik". Waxaad sidoo kale diyaarin kartaa daaweynta guriga: ku dar 1 qayb oo toon ah oo shanlay oo biyo ah, ka tag toddobaad gudahiisna ku buufi warshadda.
Caarada caarada Haddii cayayaanku uu saameeyo, hoose ee caleemaha waxaa lagu daboolay tiro badan oo dhibco cad ah, waxaa lagu duuduubay kabaha. Cunno badan oo ka mid ah cayayaanka ayaa keenaya caabuq. Sababta dhacdadu waa hawo qalalan iyo ciid. Si loo ciribtiro cayayaanka, dhirta, dheriyada iyo xirmooyinka daaqada waa in lagu tirtiraa biyo saabuun ah, ka dibna lagu daaweeyo sunta cayayaanka dhowr jeer: Apollo, Akarin, Omite.
Guduudka. Caleemaha saameeyeen waxay ku daboolan yihiin patina yar, oo la mid ah caanaha, iyo dheecaanka dhegaha. Kalluunku wuxuu dhacaa marka qallajinta xad dhaafka ah ee ciidda iyo hawada, iyadoo ay joogaan caleemo qallalan oo badan. Si looga hortago waxyeello cayayaan ah, iridiin waa in si joogto ah loo waraabiyaa, lagu buufiyaa, la nadiifiyaa, loona nadiifiyaa. Si loo baabi'iyo isticmaalka daroogooyinka: "Fitoverm", "Calypso", "Aktara".
Thrips. Marka cayayaanka qallalan ee ka muuqda hal xayawaan qolka ah, waxay awood u leedahay inay si dhakhso ah u garaacaan cagaarka xiga, sidaa daraadeed waxaa aad muhiim u ah in lagu kala saaro baadiyaha buka. Si looga hortago dhacdada, waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo qallajinta ciidda, si joogto ah biyaha u dhaq, caleemaha u dhaq. Lakabka ugu sarreeya ee ciidda ayaa loo baahan yahay in la beddelo, caleemaha waa in la maydiyaa loona daweeyaa iridaha iyadoo leh qaabab kala duwan: "Inta-Vir", "Fitoverm", "Karbofos", "Aktelli".
Guryaha oo dhan, iridine waxaa lagu kala duwan yahay midabka aan caadi ahayn ee caleenta. Waxay hubaal noqon doontaa diiradda ugu weyn ee asalka ah ee cagaarka dhirta. Markaad ka ogaato dhammaan shucuurta iyo qawaaniinta daryeelka ee dadka qaxoontiga ah, waxaad si sahlan u kobcin kartaa geed qalafsan, qoob ka baxa, geedka aan caadiga ahayn.